Yaa ku fadhiya 16ka kursi ee Garbahaarey laga wareejiay ee lagu dooranayo Ceelwaaq? | dayniiile.com
Home WARKII Yaa ku fadhiya 16ka kursi ee Garbahaarey laga wareejiay ee lagu dooranayo...
Yaa ku fadhiya 16ka kursi ee Garbahaarey laga wareejiay ee lagu dooranayo Ceelwaaq?
Guddiga hirgelinta doorashooyinka Heer dowlad Goboleed ee SEIT Jubbaland ayaa soo saaray jadwalka doorashada 16 kursi ee taalla Gobolka Gedo, kuwaas oo doorashadooda loo wareejiyay degmada Ceelwaaq ee Gobolka Gedo.
‘’Guddiga hirgalinta doorashooyinka dadban ee heer Dowlad Goboleed ee Jubbaland ( SEIT) oo tixraacaya warqadda sumadeedu tahay GHDHF/56/2022 kana soo baxday guddiga hirgalinta doorashooyinka dadban ee heer Federaal FEIT kuna taariikhaysnayd 13/04/2022 ayna ku cayimeen goob doorashada 2-Aad ee Jubbaland waxay guddiga SEIT Jubbaland halkan ku shaacinayaan jadwalka doorashada 16-ka kursi oo lagu qabanayo Degmada Ceelwaaq ee Gobolka Gedo.’’ Ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay guddiga.
Guddiga doorashooyinka Jubbaland ayaa sheegay in kuraastaan doorashadooda la qabanayo 18 ilaa 27 Bishaan ayna ka dhaceyso degmada Ceelwaaq ee Gobolka Gedo wallow maamulka Gobolka Gedo ay si adag u diidanyihiin wareejinta kuraasta.
16-ka Kursi ee Gobolka Gedo waxaa ku fadhiya.
1: HOP#065 waxaa ku fadhiya Jibriil Cabdirishiid Xaaji.
2: HOP#078 waxaa ku fadhida xildhibaan Sacdiya Muuse Cabdullaahi.
3: HOP#087: waxaa beeshiisa ku matalayay xildhibaan Maxamed Cali Xuseen.
4: HOP#090 xildhibaan Maxamed Aadam Macallim ayaa dhowr sano ku fadhiyay.
5: HOP#091: waxaa ku fadhiya xildhibaan Aadam Isaaq Cali.
6: HOP#100 xildhibaan Cabdulcaziz Cabdullaahi Yuusuf (Dhagaqool) ayaa beeshiisa ku matalayay.
7: HOP#102 waxaa ku fadhiya xildhibaan Cismaan Libaax Ibraahim.
8: HOP#110: Xildhibaan Sagal Cabdirisaaq Biixi ayaa dhowr sano ku fadhiday.
9: HOP#116 : waxaa ku fadhiya Xildhibaan Cabdulqaadir Aadan Nuur.
10: HOP#117: Kursigaan waxaa ku fadhiya xildhibaan Haashim Nuur Aadan.
11: HOP#119: Xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Xaaji oo hadda ah Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya ayaa ku fadhiya kursigaan.
12: HOP#122: waxaa ku fadhiya xildhibaan Cabdullaahi Yuusuf Xasan (Alankey).
13: HOP#123: Xildhibaan Maxamuud Cali Magan ayaa beeshiisa ku matalayay.
14: HOP#125: waxaa ku fadhida Daleys Xasan Aadan.
15: HOP#131 oo uu beeshiisa ku matalayay xildhibaan Axmed Cismaan Ibraahim.
16: HOP#216: waxaa ku fadhiya xildhibaan Cabdi Cali Xasan.
Previous articleXildh. Cali Xaaji Aadan: Haddii aan tegay meel ay ka talinayaan Al-Shabaab waan ku qasbanaa in aan adeegsado Ereygaas”.
Next articleMaamulka Gobolka Gedo Oo Ka Hor Yimid Go’aankii Guddiga Doorashooyinka
Dadka magangalyo doonka ah ee ku sugan Ingiriiska oo ka cabsanaya...
Shidaal la’aan baahsan oo ka taagan Kenya xilli dadka ay Safaf...
Beesha Caalamka” Ma jirto wax marmarsiinyo ah oo sabab u noqon...
ahmed ali - April 27, 2022 0